China Mineral Fiber မျက်နှာကျက် BC005 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ဘီဟွာ
2. ကောင်းမွန်သောအပူလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်။ ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးသံလိုက်စုပ်ယူနိုင်သည့်ပြားများ၏အပူစီးကူးမှုမှာအလွန်နည်းပါးပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအပူလျှပ်ကာပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဆောင်းရာသီတွင်ပူနွေးစေပြီးနွေရာသီတွင်အေးမြစေပြီးအသုံးပြုသူများအတွက်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည်။
၃။ အသံစုပ်ယူမှုနှင့်ဆူညံသံလျော့ချခြင်း။ ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးသံလိုက်စုပ်ယူသည့်ဘုတ်၏အဓိကကုန်ကြမ်းမှာ ၂၅၀-၃၀၀ ကီလိုဂရမ် / မီတာသိပ်သည်းဆအလွန်အစွမ်းထက်သည့်ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးအမျှင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ဝန်းသည့်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်သော micropores ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၎င်းသည်အသံလှိုင်းများကိုထိရောက်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးအသံလှိုင်း၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၅ ။ ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးအသံဖြင့်စုပ်ယူသောဘုတ်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အန္တရာယ်ရှိသောအရာများမပါဝင်ပါ။
၆ ။ Mineral wool sound-absorbing board တွင် micropores အမြောက်အများပါ ၀ င်ပြီးမျက်နှာပြင်relativelyရိယာသည်အတော်အတန်ကြီးမားသောကြောင့်၎င်းသည်လေထဲရှိရေမော်လီကျူးများကိုစုပ်ယူထုတ်လွှတ်ပြီးအတွင်းပိုင်းလေထုစိုထိုင်းဆကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
7. ရိုးရှင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောအလှဆင်။ ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးသံကိုစုပ်ယူသောဘုတ်ကိုလွှ၊ ရိုက်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအထွေထွေနောက်ခံဓားဖြင့်ခုတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွင်းဆူညံသံမရှိပါ။ ၎င်းတွင်မတူညီသောအနုပညာစတိုင်များ၏အလှဆင်သက်ရောက်မှုများကိုပေါင်းစပ်နိုင်သောပြားချပ်ချပ်ချပ်ထိုးခြင်း၊ ကပ်ကပ်ခြင်းထည့်သွင်းခြင်း၊ ထိတွေ့သောဘောင်၊ လျှို့ဝှက်ဘောင်စသည်တို့ကဲ့သို့သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုသယ်ဆောင်ထားပါသည်။
၈။ စိုထိုင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုတူးခြင်း၊ လေးဖိတ်ဆေးထည့်ခြင်း၊ ရေဓာတ်ခန်းခြောက်ခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊
၉။ ဓာတ်သတ္တုသိုးမွှေးဘုတ်ပြားသယ်ယူပို့ဆောင်နေစဉ်အတွင်းဘုတ်ကိုစိုစွတ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အစိုဓာတ်ထိန်းခြင်းနှင့်မိုးရွာခြင်းစသည်တို့၏သမာဓိကိုဂရုပြုပါ။
၁၀။ တွင်းထွက်သိုးမွှေးဘုတ်များကိုကိုင်တွယ်နေစဉ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်တင်ရမည်။ ထောင့်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ပျဉ်ပြားကိုဒေါင်လိုက်မဟုတ်ဘဲပြားချထားသင့်သည်။
ရှေ့သို့ Mineral Fiber မျက်နှာကျက် BH002
နောက်တစ်ခု: ဆိုင်းငံ့ထားသောစနစ် White ကမျက်နှာကျက် Grid